Kanaadaa - Wikipedia
Baayyina ummataa ()
Tuuta'insa ummataa /km²
Koodii lakkoofsa bilbilaa +
Kanaadaan (en: Canada) biyya bayyinan kabba Ameerikaa Kaabaa qabatte dha. Adunya kessa Kanaadaan ballina lafaa ishee yoo walitti qabanni ilallani lammaffa irratti argamtii. Kanaadaan Garba Atilaantiik irra kastee hanga Garba Paasifiik yoo balattu, kabban immo hanga Garba Arkitiik fagatti. Kibba fi kabba dhihaan Canadan United Statesiin dangefamti. Jiratotni Kanaadaa ummatta aboriginal (Indians, Metis fi Inuit) jedhamani dha. Kanaadaan bara 1867tti akka British Coloniesitt dhabatte. Haa ta'u male Kanaadaa kessa bakki tokko tokko French Colonies turrani. Kanaadaan Yunaayitid Kingidem irra kopha kan batte bara 1982tti. Haa ta'u malee Kanaadaan akka Commonwealth Countritt bekkamti, akkasumas Queen Elizabeth 2n, head of state Kanaadaatti.
Kanaadaan Federal Constitutional Monarchy yoo tatu kan ittin bultu immo Parliamentay Democracy dha. Province kudhani fi Territory sadi qabdi. Akka Federalatti Kanaadaa kessatti afaan akka biyyatti fudhatamu English fi French dha.
Kanaadaa • USA • Meeksikoo • Griinlaandi
Ameerikaa Giddu Galeessaa
Beliiz • El Salvaador • Gu'aatimaalaa • Honduraas • Kostaa Rikaa • Nikaraagu'aa • Panaamaa
Antiiguwaa fi Baarbuudaa • Bahamaas • Baarbeedoos • Dominiikaa • Giranaadaa • Heyitii • Jamaayikaa • Kuubaa • Rippabiliika Dominiikaan • Seenti Kiitsi fi Neevis • Seenti Luushiyaa • Seenti Viinsenti fi Giranadiinsi • Tirinidaadi fi Tobeegoo
Arjentiinaa • Biraazil • Boliiviyaa • Chiilii • Fireenchi Giyaanaa • Gayaanaa • Iqqu'aador • Kolombiyaa • Peeruu • Paraaguwaay • Suriinaam • Uraaguwaay • Venezu’eelaa
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanaadaa&oldid=36971" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 9 Adooleessa 2021, sa'aa 01:59 irratti.